လူမီနီယမ် PCB2Layer PCB Aluminum Base ENIG 2u" 2အောင်စကို LED လျှေ�PCB လူမီနီယမ်အခြေစိုက် ENIG 2u Layer�ုတ်လူမီနီယမ် PCB2Layer PCB Aluminum Base ENIG 2u" 2အောင်စကို LED လျှောက်လွှာ IMS ပေးသွင်း,စက်ရုံ -WMD
185*60မီလီမီတာ / 45up
ဒါဟာနှစ်ဦးကိုအလွှာဖြစ်ပါသည် လူမီနီယမ် PCB ရှင်းလင်းသောဘုတ်အဖွဲ့, ပစ္စည်းလူမီနီယမ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်ပါသည်. 1.0မီလီမီတာ±0.1မီလီမီတာဘုတ်အဖွဲ့အထူ. အပူ conduction 3.0W ဖြစ်ပါသည်. ENIG 2u" မျက်နှာပြင်ကုသမှု. metal core ကို PCBs, ထို့အပြင် IMS အဖြစ်လူသိများ(insulator တွင်လည်းသတ္တုအလွှာ) ဆားကစ်ဘုတ်, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စက်မှုနှင့်အပူတည်ငြိမ်မှု ratings ရှိ, ပါဝါ devices များသို့မဟုတ်အယ်လ်အီးဒီနှင့်အတူအသုံးပြုမှုအတွက်စံပြ. အဆိုပါ PCB ၏လူမီနီယံ core ကိုပိုလျှံအပူ၏တပ်မက်လိုချင်သောအလွန်ကျူးသေချာ. ထို့ကြောင့်, သတ္တု core ကိုဘုတ်အဖွဲ့တစ်ဦးမဟုတ်တော့ runtime နှင့်ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရကမ်းလှမ်း. အများအားဖြင့် Singlelayer နှင့် Bilayer အများဆုံးလိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်.
တင်းကျပ်ဘုတ်အဖွဲ့ PCB, 2ကြေးနီ 1oz L ကိုတင်းကျပ်ဘုတ်အဖွဲ့, LF HASL, အစိမ်းရောင် soldermask PCB.
Multilayer 4layer တင်းကျပ် PCBs FR-4 HASL LF စံ
တင်းကျပ်ဘုတ်အဖွဲ့ PCB2အလွှာစံ PCB 1oz FR4 TG135 HASL အခမဲ့ PCB အပြာရောင် soldermask ဦးဆောင်လမ်းပြ.